ई–केवाईसीको पक्षमा | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय ई–केवाईसीको पक्षमा
on: February 04, 2019 सम्पादकीय
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) झन्झटिलो भएकाले विद्युतीय विवरण अर्थात् ई–केवाईसीको व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । बैंकमा मात्र होइन, विभिन्न सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा समेत केवाईसी खोज्न थालिएको छ । यसबाट ग्राहकलाई विभिन्न कागजात बोक्दै कार्यालयहरूमा धाइरहनुपर्ने झन्झट आइलागेको छ । यसरी हरेक ठाउँमा ग्राहक पहिचान विवरणलाई अद्यावधिक गर्न लगाएर समय र सम्पत्तिको फजुल खर्च गराउनुभन्दा कुनै एक निकायमा ई–केवाईसी भरेपछि त्यसलाई सबैले मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गरे निकै सहज हुन्छ ।
कुनै ग्राहकले अरू बैंकबाट ऋण लिएको छ कि छैन भन्ने जानकारी शेयर गर्न बैंकहरूलाई समस्या छैन भने ग्राहक पहिचान विवरण शेयर गर्न भने उनीहरू किन नलागेका होलान् ?
कुनै बैंकले वर्षैपिच्छे त कुनैले केही वर्षको अन्तरालमा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्न बोलाइरहन्छन् । एकपटक बुझाइसकेका नागरिकता आदि कागजात पनि पटकपटक मागेर हैरान पार्ने गरिन्छ । ग्राहक अद्यावधिक नभए खाता र कारोबार नै रोक्का गर्ने धम्कीसमेत दिइन्छ । अझ पछिल्लो पटक बैंकले मात्र होइन, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, शेयर ब्रोकर, म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्ने संस्थाले समेत ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेका छन् । एउटै व्यक्तिले पनि आफूले खाता खोलेका प्रत्येक बैंकमा ग्राहक परिचय विवरण अद्यावधिक गराउँदै हिँड्नुपर्ने समस्या पनि छ । यो समस्या समाधान गर्न ग्राहक प्रमाणीकरणका विविध सजिला उपाय छन् । तर, तिनलाई उपयोग गर्न राष्ट्र बैंक र बैंकहरूसमेत उदासीन छन् । आखिर ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने नाममा कहिलेसम्म ग्राहकले दुःख पाइरहने त ?
कुनै पनि संस्थाले नयाँ ग्राहक स्वीकृति, ग्राहक पहिचान प्रक्रिया, लेनदेनको निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एक बैंकमा अद्यावधिक गरिसकेपछि त्यही विवरण अन्य बैंकले शेयर गर्न पाउने र सक्ने व्यवस्था गर्न खासै समस्या छैन । कुनै ग्राहकले अरू बैंकबाट ऋण लिएको छ कि छैन भन्ने जानकारी शेयर गर्न बैंकहरूलाई समस्या छैन भने ग्राहक पहिचान विवरण शेयर गर्न भने उनीहरू किन नलागेका होलान् ? यसमा राष्ट्र बैंक बाधक हुन सक्छ । त्यसो हो भने उसले सामान्य निर्णय गरेर यसलाई सहज बनाइदिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यसलाई चासो नै दिएको पाइँदैन । ग्राहक अद्यावधिक गराउने काम डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणीकरण कार्यालय, कर्जा सूचना केन्द्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै एक निकायले गर्न पनि सक्छन् । एक ठाउँमा गरिएको अद्यावधिक सबैतिर स्वीकार्य हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यस्तो कुनै निकायले दिने विशेष नम्बरका आधारमा यसो गर्न कुनै आपत्ति देखिँदैन । नागरिकता, पासपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, पान कार्ड, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समेत राखेर ग्राहक पहिचान नम्बर दिइन्छ । जहाँजहाँ ग्राहक पहिचान विवरण बुझाउनुपर्छ या अद्यावधिक गर्नुपर्छ त्यही नम्बर दिए पुग्छ । यसरी विद्युतीय रूपमा राखिने ग्राहकको अद्यावधिक विवरण नै ई–केवाइसी हो । यसमा केही परिवर्तन भए अनलाइनबाट नै अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भए पनि केवाईसी प्रक्रिया सरल हुन सक्छ ।
ग्राहक पहिचान विवरणलाई धेरै संस्थाले हाउगुजी बनाइरहेका छन् र ग्राहकलाई अनावश्यक दुःख दिएका छन् । सामान्य कानूनी सुधार गरेर र व्यावहारिकता हेरेर समाधान गर्न सकिने विषयलाई पनि समस्याको पहाड नै किन बनाइएको होला ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।